Zinc & Fitaovana fanariana fasika zinc - Serivisy fanariana maty zinc maty - Casting Minghe
Inona no atao hoe Cast Zinc Die?
Ny fanariana maty ny firaka zinc dia karazana fomba fanariana marina, izay mampiasa tsindry ambony hanerena ny vy hiditra ao anaty lasitra metaly sarotra.
Ny famolavolana sy ny fampivoarana ny lasitra zinc maty manary bobongolo, die casting dia karazana fomba fanariana marina, izay mampiasa tsindry avo hanerena ny metaly hitsonika amin'ny lasitra metaly sarotra. Any Sina, ny indostrian'ny famonoana metaly zinc dia miompana indrindra amin'ny Delta renirano sy Wenzhou, faritanin'i Zhejiang, fa amin'ny lafiny fahamatorana ara-teknolojia sy ny ambaratonga fanodinana aorian'ny fikarakarana dia mbola matanjaka lavitra noho i Wenzhou ny renirano renirano Pearl. Famakafakan'ny indostria, manaova vokatra vita amin'ny firaka zinc avo lenta tian'i Dongguan maty-casting factory, Dongguan die-casting factory ary orinasa fanodinana kely miaraka amin'ny statistika tsy feno hatramin'ny 1000! Ao amin'ny laharana indostrian'ny casting casting eto an-toerana aloha! Noho ny ambaratonga ambany amin'ny indostria, amin'ny lafiny iray, ny zavamaniry fanodinana maty dia manjaka ao Dongguan. Ny sasany amin'izy ireo dia mirotsaka amin'ny fanodinana maty rehefa mahazo efitrano vitsivitsy sy fitaovana vitsivitsy ny fianakaviany. Na izany aza, orinasa maro no nanjary tsatokazo indostrialy. Ny fanariana zina firaka zinc dia tsy tsara noho ny fizotry ny famolavolana hafa. Raha te-hanao vokatra maty tsara dia tsy afaka manana milina fanariana maty tsara ianao. Tsy maintsy atambatra ny bobongolo, ny milina fanariana maty ary ny fizotran'ny fanariana maty hahafahana mamokatra vokatra tsara.
Serivisy fandefasana maty Zinc Die
Raha mitady matihanina ianao fanariana maty zinc mpamatsy mba hanome ampahany tsara fanariana zinc maty fanariana, Minghe Casting dia iray amin'ireo mpanamboatra mora vidy sy mahay indrindra, manokana amin'ny fizotran'ny tsindry avo lenta amin'ny milina fanariana maty 200T sy 1650T. Ny ekipa teknikanay matihanina dia manana fahatakarana lalina momba ny fepetra takiana amin'ny famafazana zinc manokana (indrindra ny indostrian'ny firavaka, ny indostrian'ny fiara, ny indostrian'ny elektronika, ny indostrian'ny famahanana tsy misy tariby, ny indostrian'ny cam cam, ny orinasa mpitahiry feo, ny indostrian'ny mpandahateny Bluetooth, ny indostrian'ny famantaranandro marani-tsaina, ny indostrian'ny trano an-trano ) ary ankoatry ny faritra alyuminium, ary ny haitao zava-kanto izay nanampy anay hahatratra an'io fanavahana io. Miaraka amin'ny traikefa lehibe sy fahalalana malalaka, ny foibenay fanariana zinc dia afaka mahazaka fandeferana faran'izay mafy amin'ny famokarana zinc & vokatra.
Soa azo avy amin'ny fanariana zinc die
Lehibe noho ny lanjany izy io, manana firafitra bebe kokoa noho ny lanjany, ary manana tanjaka bebe kokoa noho ny famolavolana tsindrona plastika.
Fampisehoana tsara fanariana, afaka mamorona endrika sarotra maty, faritra matevina misy rindrina matevina, malefaka ny fandefasana azy.
Fitsaboana ambonin'ny tany: fanamafisana elektrika, famafazana ary fandokoana.
Tsy misy fitrohana vy, tsy misy loto, tsy maty miraikitra mandritra ny fanalefahana sy ny fanariana maty.
Toetoetran'ny mekanika mari-pana tsara ary mahazaka fanoherana.
Teboka malefaka, miempo amin'ny 385 ℃, mora kokoa ny mamorona noho ny fanariana maty ny firaka alimo
Tombony azo amin'ny famoahana Zinc Die
Ny fametrahana mazava tsara sy ny fandeferana avo lenta dia manome antoka ny ampahany maty hanary zinc
Fotoana sy fandaniam-bola, hafainganam-pandeha lehibe amin'ny ampahany amin'ny Zinc Die Casting
Mamela ny vokatra baikoina hatao marimarina kokoa amin'ny famaritana voalaza
Ny masinina famonoana zinc maty ho an'ny indostrian'ny teknolojia avo lenta dia azo ampiasaina amin'ny milina
Diecastingcompany.com - Manam-pahaizana manokana momba ny famonoana Zinc Die
Minghe Die Casting Company dia iray amin'ny fametrahana marina azo antoka fanariana maty zinc mpanamboatra faritra any Sina. Ny foibe fanariana zinc matihanina an-taonany maro dia manome serivisy fikarakarana anao manodidina izay halamin'ny injenieran'ny injeniera sy ny masininina manam-pahaizana anao tsara ny tetikasanao ary hikirakira izany amin'ny fomba mahomby indrindra amin'ny famonoana zinc hahafahany mamaly ny famaritana anao, ary manatsara ny fotoana sy ny fotoana. vidiny.
Famaritana ny vokatra momba ny serivisy fanariana zinc
Fitaovana fanariana zinc die maro be:
Fanary maty nentim-paharazana 2, 3, 4, 5, 7 firaka zinc sy firaka alimina zinc alimina avo za-8, ZA-12, ZA-27.
Fomba fanodinana ampahany amin'ny famonoana zinc maty:
Zinc die casting casting dia azo ampiharina amin'ny firavaka, Automobile, elektronika, famahanana tsy misy tariby, dash cam, recorder, mpandahateny Bluetooth, famantaranandro marani-tsaina, trano an-tsaina
Tombony azo avy amin'ny serivisy casting Casting Zinc Die
Mamolavola sy mamokatra faritra zinc zatra sarotra
Ny tranga fanadihadiana Minghe momba ny fanariana zinc
Safidio ny serivisy fanariana zinc tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany manaparitaka zinc dia aondrana any Amerika, Canada, Australia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Custom fanariana sinoa ny serivisy dia manome filaharana maharitra sy mora vidy izay mifanaraka amin'ny fepetra arosonao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny olonay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra ho an'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetikasan'ny casting zinc.